“Badhasaabkii Oo Xanaaqsan Ayaa Ila Soo Hadlay Oo Igu Yidhi Waan Ku Eryayaa…” Khilaaf Ka Dhashay Kharashkii Xuska 18-May Oo Ka Dhexqarxay Maamulka Gobolka Awdal – somalilandtoday.com
“Badhasaabkii Oo Xanaaqsan Ayaa Ila Soo Hadlay Oo Igu Yidhi Waan Ku Eryayaa…” Khilaaf Ka Dhashay Kharashkii Xuska 18-May Oo Ka Dhexqarxay Maamulka Gobolka Awdal
“Markii Wasiirka Arrimaha Gudahu Ila Soo Hadlay Ee Aan U Sheegay Inaanay Lacagtii Isoo Gaadhin Ayaa Badhasaabkii Oo Xanaaqsani Ila Soo Hadlay Oo Igu Yidhi; ‘Waan Ku Eryayaa!’ Wuxu Iigu Hanjabay Awood Aanu Lahayn” Cabdiraxmaan Nuur Sugaal, Badhasaab ku-xigeenka gobolka Awdal
(SLT-Hargeysa)- Badhasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Nuur Sugaal ayaa guddoomiyaha goblkaasi ku eedeeyay inuu Hargeysa la fadhiistay lacagtii kharashaadka xuska 18-may ee loogu dhiibay golka Awdal. Cabdiraxmaan Nuur Sugaal oo shalay warbaahinta la hadlay isagoo ku sugan magaalada Boorama ayaa sheegay in isaga iyo badhasaabka gobolku uu ka dhexeeyo khilaaf uu sheegay inuu ka dhashay kharashaadkii loogu talo galay xuska munaasibadda 18-may ee gobolka Awdal.
“Arrintan maalmahan dambe taagan ee laygu dhaleecaynayay, waxay nagga dhaxaysaa aniga iyo maamulka gobolka, halkaas ayuu arrinkayagu ka bilaabmay. Badhasaabku wuxu sheegay inuu lacag ii soo diray oo maayirka aanu isku dirno, aniguna waxan idhi, lacagta aniga ayaa ka masuul ah oo ah maamulkii gobolka ee ii soo dir. Wasiirka arrimaha gudaha ayaan u sheegay, waxay ahayd maalin khamiis ah oo jimce uuni u dhexeeyay maalinta xuska 18-may, wuxu wasiirku Igu yidhi; lacagtii miyaanay ku soo gaadhin? Waxaxan ugu jawaabay, maya ima soo gaadhin, markaas buu igu yidhi, imika ayay kusoo gaadhaysaa oo uu la hadlay. Kadib, badhasaabkii oo xanaaqsan ayaa ila soo hadlay oo iigu hanjabay inuu I eryayo, halkuu awoodaa ku leeyahay isagaa sheegi doonee, waan ku eryayaa, waxaad igu ashkataysay wasiirka arrimaha gudaha, intaas kadib, waxan la hadlay madaxweyne lu-xigeenka waxan u sheegay lacagtii 18-may inaanay isoo gaadhin, kadib madaxweyne ku-xigeenku wuxu la hadlay badhasaabkii, wuxu ku yidhi dir lacagta, lacagtiina way isoo gaadhay. Hawshii ugu quruxda badnayd iyo sidii ugu quruxda badnayd ayayna noogu qabsoontay munaasibadda xuska.” Ayuu yidhi Cabdiraxmaan Nuur Sugaal
Waxa uu u mahadnaqay isu duweyaasha gobolka iyo sidoo kale golaa deegaanka degmada Boorama